Vaovao - Kaongresy iraisam-pirenena momba ny fitsaboana sy fitsaboana amin'ny fahasalamana Mevos 2020 fahavaratra
Mevos International Congress of aesthetic Surgery sy Fitsaboana 2020 fahavaratra
Kongresy iraisam-pirenena momba ny fandidiana sy fitsaboana medikety MEVOS, fanangonana mpitarika manerantany amin'ny sehatry ny fandidiana plastika, ny fifanakalozan-kevitra momba ny haitao iraisam-pirenena sy ny fandrosoana amin'ny siansa farany ambony, ny fandalinana ireo lamina fisainan'ireo mpitarika manam-pahefana sy dokotera mahomby, fanaparitahana hevitra mandroso momba ny fitantanana an'izao tontolo izao sy ny Internet fanavaozana, fandrakofana feno momba ny indostria ofisialy, oniversite ary oniversite fikarohana, fihaonam-be indostrialy cosmetology ao Shina manambatra akademika, teknika, zavakanto, fitantanana, lamaody ary kolontsaina.
Ny kongresy dia manolo-tena hikaroka sy hahita ny firoboroboan'ny vokatra cosmetolojika fitsaboana, teknolojia, matihanina ary indostria, maminavina ary hamoaka ny firoboroboan'ny ho avy. Amin'ny lafiny iray, mampiseho ny teoria akademika sisintany iraisampirenena sy ny teknolojia farany amin'ny fandidiana plastika, ny aretin-koditra ary ny dermatology amin'ny tarehy, ny cosmetology laser, ny tsindrona kosmetika, ny cosmetology fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ny fitsaboana anti-antitra ary ireo lohahevitra malaza hafa; Etsy ankilany, miresaka momba ny fomba azo ampiharina izy amin'ny fampidirana tsikelikely ny fandidiana estetika sy ny sampana fanafody, ho fanavaozana ny fitsaboana kely dia kely sy tsy dia manasitrana dia midika eo ambanin'ny fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia fitaovana vaovao, fitaovana vaovao, fanafody vaovao ary fizotra vaovao.
Amin'ity fampirantiana ity, vokatra vaovao ----Fitaovana famakafakan'ny hoditra Smart ISEMECO 3D ho fampirantiana voalohany.
Ny ISEMECO dia ampiasaina indrindra ao amin'ny Departemantan'ny Dermatology an'ny Hopitaly manam-pahaizana momba ny hopitaly, ny fandidiana plastika fandidiana ary ny andrim-pikarohana siantifika.
* Seho HD + solosaina PC
* Algorithme Cloud Cloud
* Fanadihadiana data
* Tolo-kevitra momba ny vokatra mifandraika
* Fangatahana tatitra momba ny vokatra an-tserasera
* Fitantanana ny mombamomba ny mpanjifa
* Fitehirizana rahona tsy voafetra
* Famolavolana fifanakalozan-kevitra UI avo lenta
* Ny ekipanay dia namaly haingana ny tsena & ny famerenana rindrambaiko dia haingana
* Rafitra opteating 10, azo antoka kokoa
Fotoana: 13 Aogositra ka hatramin'ny 15 Aogositra 2020.